Krismasy - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Tratry ny Krismasy RECYCLABLE
Tsy tsiambaratelo fa mamokatra fako bebe kokoa isika mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Tranon'ny efitra fisakafoana feno kilalao sy taratasy famonosana, sisa tavela nandritra ny andro maromaro i Torkia, feno koba… azonao ny hevitra! Alohan'ny Krismasy dia makà fotoana handinihana ny torohevitra 12 momba ny Krismasy momba ny fanodinana mba hanampiana anao hanana Krismasy maharitra kokoa ary hampihenana, hampiasaina ary hanodina araka izay azonao atao mandritra ny fety.
Soso-kevitra 1: Haingo
Efa nametraka ny haingo Krismasy ve ianao? Mila haingon-trano ny fety, fa mifidiana amim-pahendrena satria izay rehetra manjelanjelatra dia tsy voatery ho ara-tontolo iainana. Miezaha hividy firavaka tsara kalitao izay azo ampiasaina indray mandritra ny taona maro ho avy ary jereo ny fividianana jiro vita amin'ny masoandro ho an'ny ivelany. Mahatsiaro mamorona? Maninona raha manandrana manamboatra haingon-tranonao manokana – tadiavo ny 'Haingo Krismasy Nohavaozina' na 'Haingo Krismasy Recycled' an-tserasera mba hahazoana aingam-panahy!
Soso-kevitra 2: Fanomezana
Efa nividy ny fanomezanao Krismasy rehetra ve ianao? Rehefa mividy fanomezana ho an'ny olon-tianao dia eritrereto ivelan'ny boaty fanomezana ny hevitra sasantsasany izay azo antoka fa hisy fiantraikany lehibe amin'ny olon-tianao fa misy fiantraikany kely amin'ny tontolo iainana. Ireto misy hevitra vitsivitsy:
Raha tokony hividy fanomezana ara-batana ho an'ny olona iray ianao, dia karakarao izy ireo amin'ny traikefa toy ny fanorana, kilasy mahandro, tapakila amin'ny sarimihetsika, tapakila amin'ny trano fisakafoanana na andro iray mankany amin'ny Reptile Park na Zoo.
Ho an'ny fanomezana izay maniry dia omeo hazo teratany na zaridaina ahitra.
Ny fiantrana na fanomezana ara-tontolo iainana dia afaka manome fanomezana tsara ho an'ny olona mety.
Andramo fanomezana mahasoa ny tontolo iainana toy ny toeram-piompiana kankana na komposta.
Soso-kevitra 3: Karatra
Mandefa Karatra Krismasy ve ianao amin'ity taona ity? Maninona raha mandefa e-karatra fetibe fa tsy baoritra. Raha mamoaka karatra ianao dia jereo raha afaka mahita karatra vita pirinty amin'ny baoritra efa nodiovina ianao na manao anao manokana amin'ny taratasy sy lamba fako hitanao manodidina ny trano.
Soso-kevitra 4: Bon Bons & Crackers
Ny Christmas Bon Bons dia fomban-drazana ankafizin'ny ankamaroan'ny tokantrano amin'ny andron'ny Krismasy - isika rehetra dia tia cracker tsara sy vazivazy mandringa mizara manodidina ny latabatra Krismasy. Na izany aza, ny ankamaroantsika dia hanaiky fa ny kilalao sy ny haingon-trano ao anatiny dia hiditra ao amin'ny dabam-pako. Mahatsiaro mamorona? Maninona raha manandrana manamboatra Bon Bons na Crackers Krismasy ho anao manokana – tadiavo ny 'Make your own Bon Bons' an-tserasera mba hahazoana aingam-panahy ary fenoy fanomezana izay hampiasain'ny vahiny! Ny soso-kevitra sasany dia ahitana fonosana zana-kazo, tapakila sarimihetsika, tavoahangy menaka manitra kely na sôkôla fotsiny aza. Ataovy azo antoka fa mbola mampiditra ireo vazivazy mandringa ianao - maro amin'izy ireo no hita amin'ny Internet ihany koa!
Soso-kevitra 5: Manompoa entana - Tsy misy fanariana!
Mankalaza ny Krismasy any amin'ny toerana misy anao ve ianao amin'ity taona ity? Fadio ny vilia fanariana, kaopy, antsy ary forks na mividy izay azo simba toy ny ravinkazo sy ravin-drofia izay simba sy azo amboarina. Ataovy azo antoka fa fantatry ny vahiny rehetra ny toerana misy ny dabam-pako ary raha avy any ivelan'ny tanàna izy ireo dia ataovy izay hahafantarany izay azo apetraka ao!
Soso-kevitra 6: Fonosana
Efa nofonosinao ve ny fanomezanao? Ny taratasy famonosana dia betsaka saika isaky ny tokantrano mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ary matetika dia miafara amin'ny antontam-bato lehibe amin'ny tany voatendry hariana. Ireto ambany ireto ny fomba hafa hamenoana ny fanomezanao:
Fenoy ny fanomezana amin'ny pejy iray avy amin'ny gazety tranainy ary asio loko misy loko na maka voninkazo avy amin'ny zaridaina ary apetaho eo amin'ny fonosana.
Fenoy ny fanomezana amin'ny lamba famaohana dite vaovao, sarong na apetraho ao anaty kitapo calico ny fanomezanao izay azo ampiasaina indray.
Ny sangan'asan'ny ankizy dia famonosana tonga lafatra ho fanomezana ho an'ny raibe sy renibe rehareha.
Mampiasà kitapo Dadabe Noely na stocking mifanaraka amin'ny fanomezana rehetra - tsy mila fonosina ary azo ampiasaina indray isan-taona!
Raha mividy fonosana fanomezana ianao dia tadiavo ireo safidy vita amin'ny taratasy vita amin'ny taratasy, ary fadio ny mampiasa foil-wrap & cellophane fa tsy azo averina.
Soso-kevitra 7: Sakafo
Mahandro sakafo antoandro na sakafo hariva amin'ny Krismasy ve ianao amin'ity taona ity? Ahenao ny fako amin'ny fanaovana lisitra ary manamarina izany indroa… alohan'ny hiantsenanao sakafo. Tena hampiasa an'io baoritra fanampiny io ve ianao? Amin'ny lafiny ara-bola sy ara-tontolo iainana dia tsara kokoa ny mividy bebe kokoa any aoriana raha ilaina izany, toy izay mandany ny fanananao be loatra. Manorata lisitra fiantsenana mba tsy hividianana be loatra ary ataovy izay hahazoana antoka fa ny lisitrao dia mandray an-tanana izay efa anananao ao amin'ny vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana ary pantry.
Soso-kevitra 8: Tsy tafiditra ny bateria!
Raha manome fanomezana mandeha amin'ny bateria ianao (fantatrao ireo omen'ny raibe sy renibe ny zafikeliny mba hampahatezitra ny ray aman-dreniny), dia tsarovy ny hampiditra bateria azo averina sy recharger koa. Amin'izay dia hitohy mandritra ny taona ny fifaliana Krismasy!
Soso-kevitra 9: Famerenana
Ny iray amin'ireo zavatra tsotra indrindra azonao atao mba hampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainanao amin'izao vanim-potoanan'ny taona izao dia ny miantoka ny fametrahanao ny zavatra mety ao amin'ny dabam-pako fanodinana trano. Aza adino ny mametraka ny taratasy famonosana Krismasy rehetra, valopy, karatra, satroka fety, bon bons, vilia biscuit, lovia vita amin'ny voankazo voatoto ary baoritra ao anatin'ny dabam-pako mavo anao amin'ny Andro Krismasy. TSY azo averina ny cellophane sy foil fa ao anatin'ny kobanao Red Lid, toy ny ribbons, tsipìka ary tady miolakolaka. Raha manao fifaliana kely amin'ny fety ianao - ataovy azo antoka fa hahita trano ao anatin'ny dabam-pako ihany koa ireo tavoahangy sy kapoaka ireo! Happy Recycling
Soso-kevitra 10: Serivisy fanodinana fako sy fanodinana
Aza adino ny mametraka ny dabanao! Na dia noheverina ho fialantsasatry ny besinimaro amin'ny andron'ny ady totohondry aza dia mbola hamoaka ny kobanareo manerana ny morontsiraka Afovoany ny Saofera Cleanaway. Azafady mba ho azo antoka fa apetraka eo amin'ny sisin'ny sisin-dalana ny fako amin'ny ankapobeny, ny fanodinana ary ny fanangonan-javamaniry ny alin'ny andro fanangonanao.
Soso-kevitra 11: sisa tavela
Manana sisa tavela amin'ny Krismasy ve ianao? Raha nanomana sakafo Krismasy be loatra ianao, fa aza manary izany, andramo ny ambioka ho an'ny sakafo hafa mandritra ny herinandro. Na azonao atao ny manao fikarohana amin'ny Internet momba ny 'famadihana ny sisa tavela amin'ny Krismasy ho sakafo vaovao' mba hahazoana aingam-panahy!
Soso-kevitra 12: Mulch Krismasy tena izy!
Nividy hazo krismasy tena izy ve ianao tamin'ity taona ity? Ny mponina ao amin'ny Central Coast dia afaka mamandrika ao amin'ny Collection Garden Kerbside Bulk mba hanesorana ny Hazo Krismasy rehefa nesoriny daholo ny haingony Krismasy. Ny hazo dia hoentina any amin'ny Landscapes Native Australian ary avadika ho zezika na mulch.